Guddi Farsamo oo Kismaayo Tagay
10 Nov 10, 2012 - 5:53:38 AM
Guddi Farsamo oo ka kooban Xubno Somali ah iyo Ururka IGAD oo u gogol-xaaraya Maamul u sameynta Gobolada Jubooyinka ayaa Maanta [Nov 10, 2012] ka dagay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose, kuwaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay halkaas.
Afhayeenka Kooxda Raaskambooni C/naasir Seeraar Maax ayaa sheegay in Gudigan ay hordhac u yihiin Gudi loogu talogalay inay qayb ka qaataan maamulka Gobolada Jubooyinka loo sameynayo.
"Gudigan waxay u gogol-xaarayaan u yihiin maamul loo samenayo Jubooyinka, balse ma sheegi karo xiliga ay howsha maamul sameyntu dhamaan doonto" ayuu yiri Seeraar oo Dowlada Somalia ku eedeeyay inay faragelin ku hayso Maamul u sameynta Jubooyinka.
Sidoo kale, Afhayeenku wuxuu ka hadlay maamul ka socday Dowlada iyo AMISOM oo ay Todobaadkii hore dib uga celiyeen Kismaayo, isagoo sheegay inaan lagu soo wargelin, taasina ay keentay inay dib uga celiyaan garoonka.
"Dowlada Somalia intii ay soo dhaweyn lahayd guusha laga gaaray Kismaayo ayay bilowday xagal-daacis, waxaana taas u aragnaa in dowladu aysan doonayn in Al-shabaab laga saaro Kismaayo" ayuu yiri Afhayeenka Raaskambooni.
Amaanka Magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo Mr. Seeraar uu beeniyay warar sheegaya in Al-shabaab ay madaafiic ku weerareen garoonka diyaaradaha Kismaayo markii ay wafdigu ka dageen.
Dhanka kale Afhayeenka Ururka Raaskambooni oo ka Madaxbanaan DF ayaa xusay inaanay jirin dhuxul laga dhoofiyay ilaa hada Dekeda Kismaayo, isagoo sheegay in wararka ku saabsan arintaas ay been tahay, balse ay iyaga ka go'an tahay in la qaado dhuxusha taala Dekeda iyo magaalada Kismaayo.
Todobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa muran ku saabsan dhoofinta dhuxusha uu u dhexeeyay Dowlada Somalia, Ururka Raaskambooni iyo Ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo, iyadoo Dowladu ay ku adkeysanayso inaan la dhoofin karin dhuxul.